မေတာ:ဗာဗုလုန် - Meta
This page isatranslated version of the page Meta:Babylon and the translation is 79% complete.
သင်မေးလိုသည့် ဘာသာပြန်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ၊ သံသယများ၊ အဆိုပြုချက်များနှင့် အခြားအရာများရှိပါက ဤစာမျက်နှာတွင်ရေးပါ။
တရားဝင် ဝီကီမီဒီယာ ဘာသာပြန်သူများ၏ စာပို့စာရင်း ဆိုင်းအပ်!
တရားဝင် ဘာသာပြန်သူ၏ IRC ချန်နယ်၊ သင် အကူအညီ လိုအပ်သည့် အခါ၊ စကားပြောချင်သောအချိန် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအသစ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံလာလည်ပါ။
မေးလ်စာရင်းသို့ အစားထိုးခြင်း၊ ဝီကီသတင်းလွှာဖြင့် သင့်အား အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လိမ့်မည်။
မေတာ-ဝီကီတွင် ဘာသာပြန်ပုံစံများကို စနစ်အသစ်ဖြင့် ဖော်ပြသည့် Automagical စာမျက်နှာကို (ကြည့်ပါ တိုးချဲ့မှုကိုဘာသာပြန်အကူအညီတောင်းခံခြင်း)။
CentralNotice – မေတာပေါ်တွင် ဘာသာပြန်ထားသောဝဘ်ဆိုက် နဖူးစည်းစာတန်း
မီဒီယာဝီကီတည်နေရာ (အပေါ် translatewiki.net ဆိုဒ်)
သင်၏ ဘာသာစကားအတွက် ဘာသာပြန်ရန် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းအသစ်များ ရှိပါကအသိပေးချက်များကို လက်ခံရရှိရန်၊ ဘာသာပြန်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ယခုလွယ်ကူသည်။
တူညီသော စာမျက်နှာပေါ်တွင်လည်း သင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ရှိတက်ကြွသော နည်းပညာ ဘာသာပြန်များ၏ စာရင်းတွင်ထည့်ပါ။
ဒီတစ်ပတ်၏ မေတာ-ဝီကီ တွင်ဘာသာပြန်ခြင်း ဆောင်းပါးများကို ဝီကီပီးဒီးယားသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် ထည့်ရန်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ပ်တို့ ဘာသာပြန်သူများက ;-)ဟု ထင်သည့် အရာနှင့်ဆန့်ကျင် အားလုံးကိုအမြဲတမ်းဘာသာပြန်ဆိုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သောနာမ်များနှင့် ဒေသခံအမည်များကို စာလုံးပေါင်းခြင်းများမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဝီကီစာလုံးပေါင်းကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဝီကီစာလုံးပေါင်းသည် ဝီကီနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့် ဝီကီစာလုံးပေါင်း၊ ရှိမက်ဆေ့ခ်ျများ သင်၏ ဘာသာပြန်ခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ ပါဝင်ရန်အခမဲ့ခံစားရရှိနိင်ပါသည်။!
အရင်းအနှီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာစကားများတွင် မတူညီသော စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လအမည်များနှင့် အလုပ်ခေါင်းစဉ်အများစု၏ စာလုံးများသည် အမြဲတမ်းစာလုံးကြီးများ ဖြစ်သော်လည်း ပြင်သစ်ဘာသာတွင်မူ ထိုးကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ဝစ်ရှင်နရီ စီမံကိန်းအများစုသည် ယနေ့ခေတ် စာလုံးကြီးများနှင့် စာလုံးအသေးများ အကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ ဝေါဟာရသည် အရင်းအနှီးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာစကားတစ်ခုစီ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရန်လိုအပ်သည်။ အရင်းအနှီး၏ ဇယားဖြည့်စွက် ကူညီပေးပါရန်
အမျိုးမျိုးသောဝီကီဆော့လ် ဘာသာစကားဝီကီများအကြား ဘာသာပြန်အဟောင်းများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် မည်သည့် အခါကမျှပြန်ပြောင်းဖူးခြင်း သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ပြန်ဆိုထားသေ များမှအရင်းအမြစ်စာသားများအတွက် အသစ်များ ဖန်တီးရန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု တစ်ခု၊ အင်္ဂလိပ်ဝီကီဆော့လ်တွင်တင်ထားနိင်သည်။
ဘာသာပြန်ခြင်းများနှင့် တီထွင်သူများအတွက် တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို MediaWiki.org ရှိ မူရင်းစာမျက်နှာ MediaWiki.orgတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ သတင်းအချက်အလက် ခေတ်မမီတော့ပေ။
ဘာသာပြန်နည်းဗျူဟာ စာမျက်နှာတွင် ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် မည်သို့ မည်ပုံ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အကြံဥာဏ်များဖတ်ပြီး၊ ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Meta:Babylon/my&oldid=21600340"